यी हुन् बस चालक, जसले यात्रु जोगाउन खोज्दा आफैले ज्यान गुमाए
११७८९ पटक पढिएको
धरान: सोमबार मध्याह्न धरान १३, जिरोपोइन्टमा भयानक दुर्घटना भयो । जसमा चालक र एक पाँच महिने बच्चीसहित ४ जनाको ज्यान गयो ।
दुर्घटना हुँदा अधिकांश चालकले लापरवाही गरेको भन्दै दोष दिइन्छ । तर, यो दुर्घटनामा भने प्रहरी प्रशासन र घाइते यात्रुहरुले पनि चालकलाई दोष दिएका छैनन् । बरु उनले त ठुलो क्षति हुनबाट जोगाउन प्रयास गरेको वयान प्रहरीले मात्र होइन, घाइते यात्रुहरुले नै दिइरहेका छन् ।
धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका ६ नम्बर बुधबारेबाट धरान आउदै गरेको बस शिवधारा कटेपछि सन्तुलन गुम्यो । बसको ब्रेक फेल भएको चाल पाएका चालक चक्रबहादुर गुरुङले छाताचोक, भानुचोकतिर पुग्दा ठुलो जनधनको क्षति हुने आँकलन गरेरै जिरोपोइन्टमा भएको सिमेन्टको फुटबल, स्वामीको रुख र विजुली, टेलिकमको पोलमा बसलाई ठोक्काएका थिए । यात्रुलाई पनि सुरक्षित गर्ने उनको अर्पझट निर्णयले अन्ततः चालक गुरुङकै पनि ज्यान गुम्यो ।
चालकले सिमेन्टको फुटबल र स्वामीको बोटमा बस नठोक्काएको भए !
घाइते यात्रुले भने,‘गुरुजी पनि जानु (मृत्यु) भयो है ? कत्ति जोगाउने प्रयास गर्नुहुदैथ्यो विचरा !’